यस्ता अनौठा जागिर, जसका लागि नांगै हुनुपर्छ !
मुख्य पृष्ठरोचक रमाइलोयस्ता अनौठा जागिर, जसका लागि नांगै हुनुपर्छ !
जागिर खान पनि निर्वस्त्र हुनुपर्छ भन्दा तपाईंलाई जोक्सजस्तै लाग्ला । तर, संसारका कपियत देशमा यस्ता पनि जागिर छन्, जहाँ निर्वस्त्र हुनुपर्छ । यस्तो जागिरमा मानिसले लुगा लगाउन पाउँदैनन् । यहाँ यस्ता केही जागिरबारे चर्चा गरिएको छ ः
धेरैलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि, अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा युरोपका केही देशमा बगैंचामा काम गर्ने मानिस नांगै हुन्छन् । तर, त्यस्ता मानिस पुरष मात्रै हुन्छन् । यस्तो अनौठा काम गर्दा जागिरे पुरुषले कपडा लगाउन पाउँदैनन् ।
बेलायतको लन्डनमा एउटा यस्तो रेस्टुरेन्ट छ, जहाँ हरेक कर्मचारीको जीउमा कपडा हुँदैन । त्यत्ति मात्रै हैन, त्यहाँ खान जाने ग्राहक पनि नांगै नै भएर जानुपर्छ ।
त्यसैगरी, अमेरिकाको वासिंटनमा एउटा चर्चित क्याफे छ, जसको नाम न्युड क्याफे हो । यो क्याफेमा जाने ग्राहकलाई नांगा मानिसले सेवा दिन्छन् ।
न्युड योगा स्टुडियो
बेलायतमा यस्तो पनि ठाउँ छ, जहाँ योगा गर्न जाँदा नांगै कक्षा चल्छ । इंग्ल्यान्डको चेल्सी सहरस्थित न्युड योगा केन्द्रमा काम गर्ने योगगुरुदेखि लिएर ग्राहक पनि नांगै हुन्छन् ।